Midhaan Gargaarsaan Argame Lukkeewwaniin Wayyaaneen Gurguramaa Jira!
(Madda Oduu ABO/MOA/Bitootessa 18,2009) Godina Shawaa Lixaa Ona Sayyootti Midhaan Gargaarsaa (Qamadii) ummata beela'eef qaamni addunyaa gumaache lukkeewwan wayyaanee maallaqaan gurgurachaa jiraachuun isaanii dhagahame. Gurgurtaa midhaan gargaarsaa kana keessatti kaabinootni wayyaanee Onaa fi gandaa kan keessatti hirmaataa jiran ta’uu oduun nu dhaqqabe ni mul’isa.
Haaluma wal fakkaatuun kaabinootni wayyaanee Onaa kun maallaqa daandii baasuuf ramadame birrii miliyoona 3tti tilmaamamu walii qooduun akka nyaatanis oduun kun dabalee ifa godha.
Lukkeewwan wayyaanee kun maallaqicha qooddatanii dhimma itti ba’uun gamatti, ummata ittiin dogoggorsuuf karicha anatu baasisaa irratti waldhabuuf akka yaalantu ibsame.
Wayta ammaa haalli beelaa Oromiyaa keessaa yaachisaa fi ummatas kan miidhaa jiru oggaa ta’u, rakkoon hawaasummaas daran hidda yaafataa jiraachuun beekamaa dha. Mootummaan wayyaanee fi maxxanneen isaa dhibdee ummataa kana dhoksuuf guddinni mul’ate jechuun kijiba ololaa jiraachuunis beekamaa dha.
Guutummaa Oromiyaa keessatti Gibiraa fi Baasiin Lukkeeleen Ummata irratti fe’aa jiran, ummata qe’ee fi biyya isaa irraa godaansisuu akka danda’u gabaafame.
(Madda Oduu ABO/MOA/Bitootessa 18,2009) Maddeen akka gabaasanitti Waldaalee gargaarsaa irratti erga seerri ukkaamsaan haaraan wayyaaneen ba’ee as guutummaa Oromiyaa keessatti baasiin adda addaa gosti torba ummata irratti murtaa’ee jira.
Akka kanaan wayyaanotnii fi jaleen isaanii baasii gibiraatiin alatti kan Ispoortii, Kan Fannoo Diimaa, namoota OPDO morman dabalatee baasii miseensummaa OPDO fi kkf niin ummata saamuu irratti argamu.
Haaluma kana irraa ka’uun ummanni waan kafalu dhabuu irraa qe’ee fi biyya isaa gadhiisee godaanuuf akka dirqamaa jiru maddeen dabaluun gabaasaniiru.